အ၀တ်အစားတွေက တွန့်ကြေနေပြီး မီးပူကလည်းတိုက်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် ? – Trend.com.mm
အ၀တ်အစားတွေက တွန့်ကြေနေပြီး မီးပူကလည်းတိုက်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် ?
Posted on June 19, 2018 by Noel
တစ်ခါတစ်လေ လျှော်ပြီးသားအ၀တ်အစားတွေကို မီးပူတိုက်ချိန်မရပဲ တိုက်မယ်ကြံတော့ မီးပျက်နေတာမျိုး၊ခရီးသွားတဲ့အခါ ခရီးဆောင်အိတ်ထဲစုပုံထည့်မိလို့ အ၀တ်အစားတွေ တွန့်ကြေနေတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခက်အခဲမျိုးကြုံလာပြီဆို စိတ်မပျက်ပါနဲ့။ ဒီနည်းလမ်းတွေက မီးပူမသုံးပဲသင့်ရဲ့ တွန့်ကြေနေတဲ့အ၀တ်အစားတွေကို ပြန်ပြီးပြန့်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်..
ပထမဆုံး တွန့်ကြေနေတဲ့အကျီတွေကို ဒီတိုင်းချမထားပဲ၊လုံးထွေးမထားပဲ အကျီချိတ်မှာချိတ်လိုက်ပါ။
ဆပ်ပြာမှုန့်စားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဇွန်းနဲ့ရေခဲရေအေးအေးလေးတစ်ခွက်ကိုရောစပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင် အကျီကို စပရေးဖြန်းသလိုဖြန်းလိုက်ပါ။ဖြန်းပြီးရင် ခြောက်အောင်ထားလိုက်ရုံပါပဲ။ ခရီးသွားလို့အခက်အခဲကြုံရင် ဒီနည်းလမ်းလေးက ပိုပြီးအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
၃)Hair Dryer သုံးပါ
မီးပူလိုပဲ ဆံပင်အခြောက်ခံစက်ကလည်း အကျီပြန့်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအကျီကို ရေအေးအေးလေးနဲ့စပရေးဖြန်း သလိုဖြန်းလိုက်ပါ။ပြီးရင် အပူချိန်နိမ့်ပြီး အကျီနဲ့နှစ်လက်မလောက်အကွာကနေ မှုတ်ထုတ်ပေးပါ။ဒါဆိုရင် အကျီကိုလည်း မပျက်စီးစေတော့ပဲ တွန့်ကြေနေတဲ့အရာတွေပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
ထူးတော့ထူးဆန်းသား။ရေနွေးငွေ့ကလည်း အကျီတွန့်ကြေနေတာကို ပြန့်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါ တယ်။ရေနွေးငွေ့တွေက အကျီမှာရှိတဲ့အတွန့်တွေအခေါက်တွေကို ပြန်ပြေစေပါတယ်တဲ့။ မီးပူတိုက်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် ရေနွေးအိုးလေးတည်ပြီးရေနွေးငွေ့ ခံပေးရုံပါပဲနော်။ပြီးရင်
အကျီအ၀တ်အစားတွေတွန့်ကြေနေတယ်ဆိုရင် တွန့်ကြေတဲ့နေရာလေးကို ရေခဲတုံးလေးနဲ့ကပ်ပေးပါ။ ပြီးရင် အဲ့ဒီနေရာကိုဆံပင်အခြောက်ခံစက်လေး နဲ့ မှုတ်ပေးပါ။အဲ့ဒါဆိုရင် တွန့်ကြေနေတာတွေ ပျောက်ပါတယ်တဲ့။ဒီနည်းလမ်းလေးကလည်း လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းလေးပါပဲ။
ဒါကတော့ သိကြမယ့်သူများမယ်ထင်ပါတယ်။မီးပူတိုက်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့အခါ တွန့်ကြေနေတဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို တစ်ညလုံးခေါင်းအုံးထဲမှာထည့်အိပ်တာအပေါ်ကနေ တစ်ခုခုအလေးချိန် များတာနဲ့ဖိထားတာမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အပေါ်ကဖိထားတဲ့အားကြောင့်တွန့်ကြေနေတာတွေပျောက်ပါတယ်တဲ့။အကျီကိုသေချာခေါက်ပြီးအပေါ်ကနေ မွေ့ယာဖြစ်စေဖိထားပြီး အတွန့်အခေါက်တွေ ပျောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ မီးပူမပါပဲလည်း အ၀တ်အစားတွေပြန့်နေအောင်လုပ်လို့ရပြီနော်။No iron? No problem 😉
တဈခါတဈလေ လြှျောပွီးသားအဝတျအစားတှကေို မီးပူတိုကျခြိနျမရပဲ တိုကျမယျကွံတော့ မီးပကျြနတောမြိုး၊ခရီးသှားတဲ့အခါ ခရီးဆောငျအိတျထဲစုပုံထညျ့မိလို့ အဝတျအစားတှေ တှနျ့ကွနေတောမြိုးရှိတတျပါတယျ။အဲ့ဒီလိုအခကျအခဲမြိုးကွုံလာပွီဆို စိတျမပကျြပါနဲ့။ ဒီနညျးလမျးတှကေ မီးပူမသုံးပဲသငျ့ရဲ့ တှနျ့ကွနေတေဲ့အဝတျအစားတှကေို ပွနျပွီးပွနျ့အောငျလုပျပေးနိုငျပါတယျ။ဘယျလိုမြိုးလဲဆိုရငျ..
ပထမဆုံး တှနျ့ကွနေတေဲ့အကြီတှကေို ဒီတိုငျးခမြထားပဲ၊လုံးထှေးမထားပဲ အကြီခြိတျမှာခြိတျလိုကျပါ။
ဆပျပွာမှုနျ့စားပှဲတငျဇှနျးတဈဇှနျးနဲ့ရခေဲရအေေးအေးလေးတဈခှကျကိုရောစပျလိုကျပါ။ပွီးရငျ အကြီကို စပရေးဖွနျးသလိုဖွနျးလိုကျပါ။ဖွနျးပွီးရငျ ခွောကျအောငျထားလိုကျရုံပါပဲ။ ခရီးသှားလို့အခကျအခဲကွုံရငျ ဒီနညျးလမျးလေးက ပိုပွီးအဆငျပွနေိုငျပါတတယျ။
၃)Hair Dryer သုံးပါ
မီးပူလိုပဲ ဆံပငျအခွောကျခံစကျကလညျး အကြီပွနျ့အောငျလုပျတဲ့နရောမှာ ကူညီပေးနိုငျပါတယျ။ ပထမဆုံးအကြီကို ရအေေးအေးလေးနဲ့စပရေးဖွနျး သလိုဖွနျးလိုကျပါ။ပွီးရငျ အပူခြိနျနိမျ့ပွီး အကြီနဲ့နှဈလကျမလောကျအကှာကနေ မှုတျထုတျပေးပါ။ဒါဆိုရငျ အကြီကိုလညျး မပကျြစီးစတေော့ပဲ တှနျ့ကွနေတေဲ့အရာတှပြေောကျသှားပါလိမျ့မယျ။
ထူးတော့ထူးဆနျးသား။ရနှေေးငှကေ့လညျး အကြီတှနျ့ကွနေတောကို ပွနျ့အောငျလုပျပေးနိုငျပါ တယျ။ရနှေေးငှတှေ့ကေ အကြီမှာရှိတဲ့အတှနျ့တှအေခေါကျတှကေို ပွနျပွစေပေါတယျတဲ့။ မီးပူတိုကျဖို့အဆငျမပွဘေူးဆိုရငျ ရနှေေးအိုးလေးတညျပွီးရနှေေးငှေ့ ခံပေးရုံပါပဲနျော။ပွီးရငျ
အကြီအဝတျအစားတှတှေနျ့ကွနေတေယျဆိုရငျ တှနျ့ကွတေဲ့နရောလေးကို ရခေဲတုံးလေးနဲ့ကပျပေးပါ။ ပွီးရငျ အဲ့ဒီနရောကိုဆံပငျအခွောကျခံစကျလေး နဲ့ မှုတျပေးပါ။အဲ့ဒါဆိုရငျ တှနျ့ကွနေတောတှေ ပြောကျပါတယျတဲ့။ဒီနညျးလမျးလေးကလညျး လှယျကူတဲ့နညျးလမျးလေးပါပဲ။
ဒါကတော့ သိကွမယျ့သူမြားမယျထငျပါတယျ။မီးပူတိုကျဖို့အဆငျမပွတေဲ့အခါ တှနျ့ကွနေတေဲ့ အဝတျအစားတှကေို တဈညလုံးခေါငျးအုံးထဲမှာထညျ့အိပျတာအပျေါကနေ တဈခုခုအလေးခြိနျ မြားတာနဲ့ဖိထားတာမြိုးလုပျလို့ရပါတယျ။အဲ့ဒါဆိုရငျအပျေါကဖိထားတဲ့အားကွောငျ့တှနျ့ကွနေတောတှပြေောကျပါတယျတဲ့။အကြီကိုသခြောခေါကျပွီးအပျေါကနေ မှယေ့ာဖွဈစဖေိထားပွီး အတှနျ့အခေါကျတှေ ပြောကျအောငျလုပျပေးနိုငျပါတယျ။
ဒါဆိုရငျတော့ မီးပူမပါပဲလညျး အဝတျအစားတှပွေနျ့နအေောငျလုပျလို့ရပွီနျော။No iron? No problem 😉
Big Boss ကိုလွမ်းနေသူတွေအတွက် သတင်းကောင်း ❤️